Kaleio: Netwọk mmekọrịta ọha na eze na -arụ ọrụ zuru ụwa ọnụ | Martech Zone
Kaleio: Otu Social Workforce Social Network
Ọ bụrụ na isi ihe na-akpali gị n'ịntanetị bụ ijikọ na ịkekọrịta ozi na ndị ọkachamara ụlọ ọrụ ndị ọzọ, ma ọ bụ jikọọ na ndị ahịa na ndị na-ere ahịa, Facebook na-aghọ ngwa ngwa. N'etiti foto nkeonwe na mgbasa ozi, ọ na-eme mkpọtụ. LinkedIn ka bụ ebe ị ga-abụ mana Kaleio na-achọ ịzụlite nkwukọrịta ma jikọọ ndị ọkachamara ntakịrị.
A na-edebe usoro ha, na-enweghị ngwongwo ọ bụla, n'ime akwụkwọ akụkọ, bọọdụ maka nzisa ozi maka QnA, bọọdụ ihe omume, Ahịa maka izipu ohere ma ọ bụ ịre nke gị, yana alọ Mgbakọ - ebe ị nwere ike ijikọ ndị ọzọ naanị.
Kaleio ọhụụ bụ okpukpu anọ
Mee ka ndi mmadu na-aru oru n'uwa dum. Ka ọ dị ugbu a, enweghị ụzọ nkwukọrịta dị mfe n ’ụlọ ọrụ, ọrụ aka, na aka ọrụ ndị dị n’ụwa.
Ikwado ịkparịta ụka n'andntanet na njikọta n'etiti ndị ọrụ ọrụ zuru ụwa ọnụ. Kaleio na-enye ndi na aru oru ume ka ha chee na ha so na ndi mmadu ghotara nsogbu ha na oru ha kwa ubochi.
Ebe maka akụkọ ụlọ ọrụ akọwapụtara ma saa mbara, mmemme, mmelite na ọnọdụ. Ndị otu na-anọ ugbu a na akụkọ ụlọ ọrụ, ihe omume, mmelite, na usoro.
Na-enye ndị nọ na-arụrụ ọrụ ọrụ ohere ịnye, yana ịchọ, ọrụ, ngwaahịa, ọrụ na ihe ngwọta Kaleio bụ ụgbọ ala nke na-enye azụmaahịa efu maka azụmaahịa, gụnyere ngwa nyocha kachasị mma maka ngwaahịa, ọrụ, ngwọta, na ohere ọrụ. Ndị mmadụ n'otu n'otu nwekwara ike ịrịọ, ma ọ bụ nye, ndụmọdụ ga-enye aka maka azụmaahịa kwa ụbọchị, nke onwe, ma ọ bụ nke ụlọ ọrụ.
Otu nnukwu ọdịiche m na-ahụ Kaleio bụ na ọ bụghị nke kachasị maka iji ekwentị eme ihe ma ọ bụ na ọ nwere ngwa mkpanaka. N'ụwa ebe ndị ọkachamara na-eji ekwentị ha eme ihe dị ka ngwaọrụ nkwukọrịta mbụ ha, ọ dị mkpa itinye nke a ma ọ bụrụ na ha nwere olile anya iwepụ dị ka ikpo okwu!
Jikọọ Kaleio n'efu taa. Ha ezubere iche mgbasa ozi nwere ike zụta kwa.
Tags: netwọk b2bobodoọzọelekọta mmadụ na netwọk
5 Uru nke dinggbakwunye Infographic na saịtị gị